तपाईलाई कुन साइजको ब्रा ठिक हुन्छ ? स्मार्टफोनले बताउने – Everest Times News
तपाईलाई कुन साइजको ब्रा ठिक हुन्छ ? स्मार्टफोनले बताउने
आफुलाई कुन साइजको ब्रा ठिक होला भनेर पसल चहार्दाचहार्दा दिक्क हुनुभएको छ ? अब त्यसरी दिक्का हुने दिन गए । किनभने हालै एक कम्पनीले एक एप विकसित गरेको छ । सोही एपमार्फत तपाईले आफुलाई कुन साइजको ब्रा ठिक हुनेछ पत्ता लगाउन सकिनेछ ।
अमेरिकाको थर्ड लभ नामक कम्पनीले बनाएको उक्त एपबाट आफुलाई फिट हुने ब्रा सजिलै किन्न सकिने भएको छ । यसका लागि भने स्तनको सेल्फी दुईपटक खिच्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । एपमा फोटो अपलोड गरेपछि उक्त फोटो थ्रिडी डाटामा बदल्ने र ब्राको साइज बताउनेछ ।
बेलायतमा अवस्था सुधार, जर्मनीमा काेराेना संक्रमित बढे
फेरि काेराेना देखिएपछि बेइजिङका सयौँ उडान र रेलसेवा रद्द
भारत चीन सीमामा भएको हिंसाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो
कोरोना भाइरसबाट विश्वमा ४ लाख ३९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु, ८१ लाख भन्दा बढी संक्रमित
बेइजिङमा फेरि कोरोना संक्रमित भेटिए
कोरोनाबाट विश्वमा ४ लाख २८ हजार भन्दा बढीको मृत्यु, करिब ७७ लाख ४१ हजार संक्रमित